Gun iyo gaalo Waa Farxeen Gobise geeri Waa taqaan W/Q C/llaahi Soomaali.
Monday September 08, 2014 - 14:37:07 in Wararka by Super Admin
Allaah baa mahad iska leh nabad gelyo iyo naxariis nabi Muxmed korkiisa ha ahaato.
Maraykan iyo xulufadiisa waxay la tahay haddii Sheekh abuu subeyr geeriyooday in xarakada shabaabul Mujaahidiin tusbax go’ay noqoneyso laakiin fikirkaasu waa waa mid aan caafimaad qabin maskax waayo aragnimo ama indheer garadnimo ay ku jirtana aan ka soo fulin.
Abuu subeyr wuxuu ahaa hogaamiye kacdoon jihaadhormuud u ahaa booskiisana waxaa durba lagu bedelay nin aan rejeynayo in gaarsii doono Mujaahidiinta heer ay cadawgu dhegaha fara geliyo oo uu candhuuftiisa gadaal u leqo.
Taariikhda hadaanu dib ugu noqono cadawgu waxay dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay Beegsadeen hogaamiyaal badan oo Mujaahidiinta Caalamka ka hana qaaday garwadeen u ahaa kuwaasoo shahiiday laakiin Allaah mahaddii nin kasta shaqadii uu hayay raggii ku hareereysnaa baa bartii ka sii waday.
Waxyaabaha la yaab ka leh waxaa ka mid ah in markii shuuqdii geesiyaasha ahaa ee xarakaadka jihaadiga madaxda u ahaa,qaarkoodna ay ahaayeen aas aasayaashii unkay kolkii ay shahiideen in awoodda xarakaadku barakowday oo mid waliba ka sii balaaratay sidii ay ahayd maalinii amiirka la bartilmaameedsaday.
Aan soo qaadano tusaalooyin kooban oo nagu filan kuwaasoo waayadaan jihaadka loo qalab qaatay ka dhacay gudaha soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah.
Sanadkii 2008-dii ciidamada saliibiyiinta ah ee maraykanku waxay gentaalo waweyn oo is daba jooga ku rusheeyeen guri uu ku jira Macalin Aadan Xaashi Ceyrow oo ahaa taliyihii ciidamada Xarakada Alshabaab Miisaan weyna u lahaa dhaq dhaqaaqa dhexdiisa maadaama uu ka mid ahaa shaqsiyaadkii udubada u muday una adkeeyay.
Wax badan ayuu cadawgu Mujaahidkaa geesiga ah baadi goobayay hadafkuna wuxuu ahaa in jihaadku Geesaha dhulka la galo si dalka shisheeyaha gumeysigiisu durba uga hirgalo shareecada Islaamka ee ay koryeelideeda asiga iyo saaxiibadii u taagnaayeenna meesha looga saaro.
Aadan Xaashi wuxuu ahaa nin Allaah hibo u siiiyay isu keenna dad ninba dhan u jeeday ama kala fikir ahaa dadeedna uu ku mideeyo in xaqqa la kor yeelo baadilkana cagta ka hoos la mariyo si taas loo hir geliyana ay lagama maarmaan tahay in cadawga dalka qabsaday lala dagaalamo kaasoo ciidamada Itoobiya xiligaas ugu horreen.
Maraykanka inkaaranu wuxuu qabay aragti gurracan iyo garasho jaban oo ahayd in haddii ninkaan Aadan xaashi ah la dilo ururku kala daadanayo una kala firxanayo sidii ari weer galay.
Laakiin taas cagsigeeda xarakada shabaabul mujaahidiin oo markaas gobalo aan badnayn jabhado ka joogeen dilkiisa kadib waxay noqotay dab dhagax lagu dhuftay waxaanay u kobacday tayo ahaan iyo tiro ahaan iyadoo xukunkeedu gaaray 11 gobal oo koofurta iyo bartamaha soomaaliya ka mid ah.
Mudadaas waxaa hogaamiye ahaa oo isla bishii Macallin aadan xaashi ceyrow shahiiday Amiir laga dhigay allaha shahaadada ka aqbalee imiirka iminka shahiiday Sheekh muqtaar cabdiraxmaan abuu subeyr.
Geesta kale 2-dii bishii may 2011 waxaa shahiiday oo maraykanku guriguu deganaa weeraray sheekh Usmaa bin ladin hogaamiyahii ururka alqaacida waxaana markaas madaxweyne Obama odorosayay in uu guulo ku taallaabso doono oo alqaacida halkaas ku dhamaatay laakiin Allaah baa ku mahadsane awoodda ururka ayaa sii fidday.
Alqaacida iyadoo sideedi u dhisan waxaa jira Mujaahidiin kale oo ka farcamay oo iminka wadamada ciraaq iyo suuriya ka jihaadaya xukumana magaalooyin badan oo dalalkaas ka tirsan kuwaasoo dowlad islaami ah ku dhawaaqay.
Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin waxay madaxdeedu ku dadaaleen dhismaha ciidanka, sugidda xogta, Adkeynta midnimada, kala dambeynta iyo u hogaansanaanta umurada, ka digtoonaanta dhagaraha cadawga oo jawaasiistu ugu horreeyaan, maareynta dhaqaalaha iyo qodobo kale oo badan.
Hogaamiyaha csub Sheekh Axmed Cumar Abuu cubeyda, waxaa looga fadhiyaa inuu howsha qabyada ahayd dhameystiro.
Waxaa sugaya jid dheer oo saaxiibkii falis ku bilaabay oo lagana doonayo in uu godomi waaweyn u afeysto.
Waxaan rejeynayaa insha Allaah in taasu u fududahay maxaa yeelay wuxuu ku jiray gacanyarayaashii ama saraakiishii amiirka shahiiday wax la maamulayay.
Inkastoo geerida aan loo kala habeen lahayn ee loo kala horreeyo waanu sugeynay in gaalo ay faraxdo maxaa yeelay waxay dishay hogaamiye Muslim ah oo baadilka ay geed dheer iyo geed gaaban hirgelintiisa u fuulayaan dagaal kula jira qaar badna oo iyaga ka tirsanaana qoorta u gaduudiyay.
Laakiin waxaan la yaabay dad Muslim sheeganaya hadana kufaarta farxadda la wadaaya uguna hambalyeynaya ficil ay geesigii ku beegsadeen, waxaanse isga daynayaa in Allaah uu xaqsoore yahay xalkoodana la socayo.
Waxaan ku soo gaba gebeynayaa gun iyo gaalo waa farxeen gobise geeri waa taqaan.
W qoray Cabdulaahi Yaasiin Jaamac (Cabdulaahi-soomaali)
Kala Xariir Email [email protected]
Ciidamo lagu weeraray magaalooyinka Baardheere iyo Beled Weyne.
Dad Shacab ah oo lagu xasuuqay magaalo katirsan dalka Yemen.